နင်ကအကောင်ကြီးတယ်….၂ခါလျှောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » နင်ကအကောင်ကြီးတယ်….၂ခါလျှောက်
Posted by kai on Jun 11, 2010 in Politics, Issues |5comments
ကာတွန်း - ဟန်လေး (၄ . ၄ . ၂၀၁၀ l ဟံသာဝတီ )
အထက်က ပုံပြင်ကို ကျုပ်က( http://myanmargazette.net/?p=9020 )မှာ ကောမန့်အနေနဲ့တင်ထားခဲ့တာပါ။
အခု အင်တာနက်ထဲလိုက်နှိုက်ရင်း ကာတွန်း – ဟန်လေး ၄ . ၄ . ၂၀၁၀ က ဟံသာဝတီ ၀က်ဆိုက်မှာ ကာတွန်းတင်ထားတာတွေ့တာမို့ ကာတွန်းယူရင်း ဒီမှာပါရောပြီး ပို့ စ်အသစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီပုံပြင်အရ … အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် သဘောပေါက်မိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
မီးဆိုတာ ကိုယ့်လက်ပေါ်ကျမှ ပူမှန်းပိုသိတယ်တဲ့..
ကာယကံရှင် ဂဏန်းက တခေါက်တခေါက် ဖြတ်ရတဲ့အခါ ရေနွေးငွေ့ ဘယ်လောက်ပူတယ် ပိုသိမှာပေါ့နော။
ဒီပုံပြင်နဲ့ဆင်တာလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာလေး တွေ့လိုက်ပြီး ပြန်ရှာမရလို့ဗျာ…။
once I posted that story, titled : YOU ARE TOO BIG …… TRY AGAIN PLEASE. But I do not remember the link number ….now this one is with illustrates …very good. At my post I added : how many times we have to vote…like this.
ညာဖက်အပေါ်က Search နဲ့ရှာလိုက်တာ တွေ့ပါပြီခင်ဗျား။ လေ့လာသူတွေ ဖတ်နိုင်ဖို့ပါ။